तँ बलात्कारी होस् ! हेटौंडा मार्चपासका फोटोहरु - Sidha News
तँ बलात्कारी होस् ! हेटौंडा मार्चपासका फोटोहरु
मकवानपुरको हेटौंडामा बलात्कार र महिला हिंसाविरुद्ध स्वतन्त्र रुपमा युवतीहरु जम्मा भएर मार्च पास गरेका छन्। हेटौंडाको मुख्य चोकमा रहेको बुद्धचोकमा करिब ४० जना युवती, किशोरीले मार्चपास गरेका थिए भने र्‍याली र प्रदर्शनमा १ सय जनाभन्दा बढीको उपस्थिति थियो। कालो टिसर्ट,कालो पाइन्ट र कालो फेटा बाँधेर बलात्कार र महिला हिंसाविरुद्ध सांकेतिक प्रदर्शन गरेका हुन्।
बला’त्कारबिरुद्ध युवतीहरु आक्रोशित हुँदै सडकमा (तस्बिरहरु)
रातमा पनि चम्किन्छ ऐतिहासिक रानीपोखरी (फाेटाे फिचर)